Zavatra tokony ho fantatra momba ny GPS Tracking System | Singapore Top Mini GPS Tracker manokana ho an'ny autisme / Autistic Kids & Dementia Anti-panahy
Ny asan'ny fitaovana fanaraha-maso GPS dia mitovy amin'ny alàlan'ny fampitana izany, fa tsy fampisehoana ny fampahalalana amin'ny fitaovana rehetra, ny mikropôkatroka amin'ny fitaovana dia hanisa ny toerana misy azy ary avy eo ampitao any amin'ny mpizara foibe amin'ny Internet ny finday. Aorian'io dia misy ny sehatra iray natolotry ny mpizara hampiseho ny toerana misy ankehitriny sy ny làlana ara-tantara an'ny fitaovana ho an'ny mpampiasa, ary koa ny hafainganana sy ny fampandrenesana.
Misy tombony hafa azo avy amin'ny rafitra fanaraha-maso GPS izay ahafahan'ny tompona orinasa manara-maso ny toeran'ny fiaramanidina manara-maso ny fihetsiky ny mpiasa. Ny mpandeha sasany dia nametraka fitaovana GPS tao amin'ny entana mba tsy hahitana halatra na very. Ny karazana rafitra toy izany dia ilaina koa ho an'ny fianakaviana. Afaka mampiasa fitaovana GPS ny fianakaviana mba hitazomana ireo ankizy, antitra na biby fiompy.
Ahoana no fomba mahomby amin'ny fampiharana ny rafitra midina amin'ny lehilahy (A10004)